आइतबार बढेको सुन चाँदीको मुल्य आज कति ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आइतबार बढेको सुन चाँदीको मुल्य आज कति ?
आज नेपाली बजारमा सुनको मुल्य स्थीर रहेको छ । हिजो आइतबार बढेको सुनको मुल्य आज स्थीर रहेको हो । आज सुन प्रतितोला ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ७५ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ भने चाँदीको मूल्य पनि परिवर्तन नभई प्रतितोला ८ सय ८० रुपैयामा कारोबार भइहेको महासंघले जनाएको छ ।
सरकारी सम्पत्तीमा रजाँई, दिनको ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सोल्टी होटलको आइसोलेसनमा
मृत्यु पूर्व संक्रमितको एसएमएस : आइसोलेसनको बेथितिले झन त्रास बढायो
अत्यधिक चिसो बढेपछि राजविराजका सम्पूर्ण विद्यालय तीन दिन बन्द
कास्कीमा विद्या भट्टराई भारी मत अन्तरले विजयी